समाचार - कसरी तातो डुबेको जस्ती तार - तातो डुबेको (जीआई) तार बनेको छ?
कसरी तातो डुबेको जस्ती तार - तातो डुबेको (जीआई) तार बनेको छ?
तातो डुबेको Galvanizing प्रक्रिया मा, एकल uncoated इस्पात तार पिघला जस्ता स्नान को माध्यम बाट पारित गरीन्छ। तार एक कठोर 7-चरण कास्टिक सफाई प्रक्रिया को माध्यम बाट जाने पछि पिघला जस्ता को माध्यम बाट पारित गरीन्छ। सफाई प्रक्रिया राम्रो आसंजन र सम्बन्ध सुनिश्चित गर्दछ। तार तब चिसो हुन्छ र जस्ता को एक कोटिंग बनाईन्छ।
तातो डुबकी galvanizing इलेक्ट्रो galvanization भन्दा धेरै राम्रो जंग प्रतिरोध प्रदान गर्दछ किनभने जस्ता कोटिंग सामान्यतया5देखि 10 गुना मोटो छ। बाहिरी वा कास्टिक अनुप्रयोगहरु को लागी जहाँ जंग-प्रतिरोध आवश्यक छ, तातो डुबकी जस्ती तार स्पष्ट छनौट हो।
तातो डुबकी जस्ती जस्ता परत को मोटाई ५० माइक्रोन भन्दा बढी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, अधिकतम १०० माइक्रोन सम्म पुग्न सक्छ।
तातो डुबकी galvanizing एक रासायनिक उपचार हो, विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया हो। चिसो galvanizing भौतिक ठेगाना हो, बस जस्ता को सतह परत ब्रश, जस्ता परत बन्द गर्न सजिलो छ। तातो डुबकी galvanizing को उपयोग मा निर्माण।
तातो डुबकी जस्ती उच्च तापमान मा पिघल पिघलिएको छ, ठाउँ मा पूरक सामाग्री को एक संख्या, तब डुबेको जस्ती धातु संरचना स्लट, जस्ता कोटिंग को एक परत मा धातु घटक। तातो डुबकी को क्षमता आफ्नो क्षमता, आसंजन र जस्ता कोटिंग को कठोरता को जंग जंग राम्रो छ।
तातो डुबकी जस्ती तार को लाभ
Electro लामो जीवन अवधि इलेक्ट्रो जस्ती तुलनामा
• प्रक्रिया इस्पात सतह मा एक फलाम जस्ता मिश्र धातु परत र बाहिरी सतह मा एक शुद्ध जस्ता कोटिंग बनाउँछ। मिश्र धातु उच्च शक्ति र ठेठ abrasions को प्रतिरोध प्रदान गर्दछ।
• जस्ता कोटिंग मोटाई इलेक्ट्रो जस्ती कोटिंग भन्दा १० गुना मोटो हुन सक्छ
तातो डुबकी जस्ती तार को हानि
Electro इलेक्ट्रो जस्ती तार भन्दा महंगा
Z जस्ता को मोटाई उत्पादन भर असंगत हुन सक्छ